बच्चाहरूले ट्वीट गर्दैनन्
बुधबार, अक्टोबर 6, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 म्याट चन्डलर
सामाजिक नेटवर्क साइटहरूमा उमेर वितरण
यस महिना मैले वेब मार्केटि inमा कलेजको पाठ्यक्रम पढाउन शुरू गरें इंडियानापोलिस को कला संस्थान। मेरो कक्षाका अधिकांश १ students विद्यार्थीहरू फेशन डिजाइन र खुद्रा बजारमा स्नातकको नजिक छन, र उनीहरूको लागि मेरो पाठ्यक्रम आवश्यक छ।
वास्तवमा, पहिलो रात जब विद्यार्थीहरू कम्प्युटर प्रयोगशालामा आए र बसे, तिनीहरूले पूर्ण रूपमा आफैलाई छान्छन्ः मेरो दायाँपट्टि मेरा १० फेशन विद्यार्थीहरू, मेरो देब्रेपट्टि मेरा पाँच वेब र ग्राफिक डिजाइनका विद्यार्थीहरू। म कनिष्ठ हाई स्कूल नृत्यजस्तो थिएँ जसमा केटीहरू र केटाहरूले विपरीत भित्ताहरू बिरूवा रोपेका थिए, प्रत्येक पक्षले अर्कोतिर ध्यान दिएर हेरे।
म पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रम परिचय मा जाँदा, सामाजिक मिडिया एक ठूलो भूमिका खेले। मैले सोचे कि विद्यार्थीहरू यो सबै भएको हुनेछ, तिनीहरू मध्ये धेरै ईमेल प्रयोगशालामा छिट्टै आइसकेका थिए र फेसबुक। तर म अन्तमा छक्क परें।
मेरो कक्षाको लगभग दुई तिहाई कहिल्यै प्रयोग गरेको थिएन वा हेरेको थिएन twitter। ती मध्ये धेरैलाई थाहा थिएन कि यो के हो वा केको लागि हो। ती मध्ये केवल एकले ब्लग गर्यो, र अर्को व्यक्तिको आफ्नै वेबसाइट थियो।
जब हिट फ्लोर
प्रतीक्षा गर्नुहोस्, तपाईले मलाई भन्नु पर्ने भनेको सब भन्दा तार, जडित, सँधै-पुस्ताले आधारभूत सामाजिक नेटवर्कि tools उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेको छैन? के मिडियाले मिथ्या र झूटलाई निरन्तरता दिइरहेको छ? के म आफ्नै सानो संसारमा यति फस्टाएको छु कि मैले जनसंख्याको पूरै भागलाई बेवास्ता गरें?
मेरो आश्चर्य देखेर, मेरो एक विद्यार्थीले जवाफ दिए, "ओह, मैले यो फेसबुकमा देखेको छु: 'ट्विटर मार्फत पोष्ट गरिएको।' मलाई थाहा भएन कि त्यो के हो। ”
ठीक छ, त्यसैले म हास्य प्रभाव को लागी मेरो झटका खेलिरहेको थियो। म पूर्ण रूपले सचेत छु कि विभिन्न उपकरणहरू र च्यानलहरूको अपनन, धेरै अन्य कारकहरू बीच, उमेर समूहले फरक गर्दछ। मलाई थाहा छ कि पुरानो डेमोग्राफिक्सको बीचमा लोकप्रियतामा ट्विटर लाभहरू। तर म छक्क परें कि यी शुरुवातका बीस-बीसथाहरूमध्ये कति जनालाई ट्विटर के हो भनेर थाहा थिएन।
केहि म्याथ गरौं
यसले मलाई पछाडि जान र सामाजिक नेटवर्क साइट उमेर वितरणको बारेमा केहि भर्खरको अनुसन्धानहरू हेर्न प्रेरित गर्‍यो। फेब्रुअरी २०१० मा, गुगल विज्ञापन प्लानरबाट डाटा प्रयोग गरेर, रोयल पिंग्डम देखाईयो कि १ most सबैभन्दा लोकप्रिय सोशल नेटवर्कि sites साइटहरुमा, १-19-२18 बर्ष उमेरका प्रयोगकर्ताहरु मध्ये केवल%% को हिसाब। ट्विटरको मामलामा, उही समूहले १०% भन्दा कमको लागि जिम्मेवार छ, Twitter Twitter% ट्विटर प्रयोगकर्ताहरू 249बर्ष वा माथि उमेरका छन्।
समग्रमा, -35 44--45 र -54 74--0 बर्ष उमेरकाले सामाजिक नेटवर्कि sites साइटहरूमा प्रभुत्व जमाउँछन्, जसले संयुक्त 17 21% प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, ती १ aged-१ aged बर्षे उमेरका (शून्य-वर्ष-उमेर प्रयोगकर्ता कम्प्युटरहरू) का लागि २१% खाता छ, जसले उनीहरूलाई दोस्रो ठूलो प्रयोगकर्ता समूह बनाउँछ।
मई २०१० को एक क्वार्टरमा छिटो-फर्वार्ड गरौं र एडिसन रिसर्चको एक अध्ययन "अमेरिकामा ट्विटर प्रयोग: २०१०।" तिनीहरूको अनुसन्धानका अनुसार १ 2010-२2010 वर्षका बच्चाहरूले मासिक ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूको ११% हिस्सा बनाएका छन्। संयुक्त %२% को साथ, २-18--24 र -11 52--25 समूह अझै पग्लिन्छन्।
अब, यहाँ प्रतिनिधित्व गरिएको जनसांख्यिकीय बीचमा एक महत्त्वपूर्ण गणितीय भिन्नता छ: १-18-२ year बर्ष उमेरका अन्य सबैको १० बरू सात बर्षको अवधि। त्यसैले यो ब्रेकडाउनको आधारमा नम्बर ट्वीक गर्नका लागि केही मार्जिन छ, तर मँ निश्चित छु कि यो सबै धोइ बाहिर आउँछ।
तिनीहरू किन बोर्डमा छैनन्?
यदि म सेमेस्टरको मेरो पहिलो पाठ विश्वास गर्छु भने, वेब मार्केटिंगको लागि प्राथमिक ड्रम भनेको तपाईंको सामग्रीले ग्राहकहरूलाई मूल्य प्रदान गर्नुपर्दछ। मेरा विद्यार्थीका अनुसार उनीहरूमध्ये धेरैले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई व्यापक रूपमा ट्विटर प्रयोग गर्ने कुरा जान्दैनन्। त्यसकारण साइट र यसको सेवाले कुनै मूल्य प्रदान गर्दैन।
दोस्रो, कक्षामा सबैले फेसबुक जाँच गर्दै थिए। केहीले रिपोर्ट गरे "ट्वीटर मार्फत" भ्वाइएजेस स्टेटस अपडेटमा देखाउँदै, कि उनीहरूका केहि साथीहरूले ट्विटरको प्रयोग वास्तवमै गर्छन्। यसले मेरो पाठको दोस्रो अंशलाई प्रमाणित गर्दछ (र यसको एक विशाल कम्पोनेन्ट उग्र व्यवसाय मोडेल), जुन त्यो त्यो प्लेटफर्म होईन जुन महत्त्वपूर्ण छ, यो सामग्री हो। अद्यावधिक भएको ठाउँलाई उनीहरूले मतलब गरेनन्, तिनीहरूलाई मात्र थाँहा थियो कि उनीहरूलाई उनीहरूले आफ्नो छनौटको प्लेटफर्म मार्फत प्राप्त गर्न सक्छन्।
अन्तमा, दुबै माथिको अनुसन्धान तथ्या .्क र मेरो अनुमानित प्रमाणहरू ठूला धारणामा औंल्याउँछ कि कलेजका विद्यार्थीहरू साइटहरू, नेटवर्कहरू र प्लेटफर्महरूको एक समूहको लागि निरन्तर जाँच (वा जाँच गर्न) अन्य कामहरू गर्नमा एकदम व्यस्त छन्। तिनीहरू मध्ये धेरैले रिपोर्ट गरे कि उनीहरूले इन्टरनेटमा नक्कल गर्नु भन्दा अर्कै समय काम गर्ने समय बिताए।
त्यसो भए हामी के गर्छौं?
अनलाइन मार्केटरहरूको रूपमा हामीले फरक उमेर समूहहरूको लागि यी उपयोग मतभेदहरू बुझ्नुपर्दछ र अँगाल्न पर्छ। हामीले सामग्रीलाई उनीहरूसँग लिनुपर्दछ जो हामी वास्तवमै प्रयोग गर्ने उपकरणहरू प्रयोग गरेर पुग्न चाहन्छौं। यो पूर्ण अनुसन्धान र अनलाइन पहलका लागि योजना बनाएर, र कुन प्लेटफर्महरू मोनिटर, मध्यम र मापन गर्ने भनेर जानेर हासिल गरिन्छ। अन्यथा, हामी हावामा समय, प्रयास र पैसा फ्याँकिरहेका छौं र सही ग्राहकहरूले समातेको आशामा।
टैग: उमेरउमेर वितरणलौरा लिप्पेसामाजिक संजालtwitter
म्याटको लागि डिजिटल सामग्री प्रबन्धक हो ईन्जर्सोल रान्ड सुरक्षा टेक्नोलोजीहरू, र वेब मार्केटिंगको एक सहायक प्रशिक्षक हो इंडियानापोलिस को कला संस्थान। उनीसँग १० बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ ईन्टरप्राइज संगठनहरूका लागि रणनीति सिर्जना र अनलाइन सामग्री प्रबन्ध गर्न उग्र, NYU ल्यांगोन मेडिकल सेन्टर र सामुदायिक स्वास्थ्य नेटवर्क। उनीसँग हास्यास्पद विनाइल रेकर्ड संग्रह र जर्ज बेन्सन नामको पग पनि छ।
B2B: भिडियोहरूले खरीद निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्दै छ
किन तपाईंको नेटवर्किंग रणनीति तपाईंलाई असफल गर्दैछ
अतुलनीय रूपमा रोचक, विशेष गरी तपाईको संख्या भन्दा बाहिरको रूप। जबकि युवा जनसांख्यिकीय आवश्यक रूपमा Twitter मा झुण्डिएको छैन, तिनीहरूले सामग्री एक वा अर्को रूपमा हेर्दै छन् किनकि यी सबै विभिन्न माध्यमहरू सँगै आउँछन्, त्यसैले यो अझै पनि यो उमेर सेटको लागि Twitter को लाभ उठाउन लायक छ।
अक्टोबर 7, 2010 बिहान 8:38 बजे
मलाई सम्झन्छु कि मेरो छोराले म कति इमेल प्रयोग गर्छु भनेर हाईस्कूलमा हुँदा मसँग हाँसेको थियो। अब जब उहाँ IUPUI मा एक वरिष्ठ हुनुहुन्छ, इमेल एक आवश्यकता हो र उसले एक स्मार्टफोनमा पनि राख्नको लागि स्विच गरेको छ। मलाई थाहा छैन कि युवाहरूले व्यवहारलाई चलाउँछ, मलाई लाग्छ कि आवश्यकताले यसलाई चलाउँछ। Twitter मेरो लागि जानकारी पचाउन र फिल्टर गर्न धेरै सजिलो छ, जबकि Facebook मेरो नेटवर्क र व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको बारेमा बढी छ। यदि मेरो छोराले केही वर्षमा आफ्नो नेटवर्कसँग थप कुशलतापूर्वक जानकारी साझा गर्न 'ट्विट' गर्दैछ भने म छक्क पर्नेछैन।
केटा, तिमीलाई नसामा चोट लागेको छ! डग कररले तपाईलाई बताउनुहुन्छ कि उसले IUPUI मा मेरा केही कक्षाहरूसँग कुरा गरेको छ र उसले सायद बिर्सेको छ कि तिनीहरू कति सानो थिए! निस्सन्देह, तिनीहरू स्पष्ट रूपमा सोशल मिडियाको बारेमा थिएनन्, तर मैले मेरो पाठ्यक्रमहरूमा व्यापक रूपमा सोशल मिडिया प्रयोग गरें र मैले विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको मूल्य सिक्न र व्यक्तिगत ब्रान्डिङको लागि "बाइ इन" गर्न सँधै कठिनाई भोगेको छु।
मैले एकेडेमिया छोड्नुको एउटा कारण यो थियो कि "मैले बेच्नु पर्ने कुरा कसैले किनेको थिएन" त्यसैले म केहि अन्य प्रयासहरू खोज्न अगाडि बढेको छु जहाँ मानिसहरू सिकाउने र सिक्ने, मार्केटिंग, वा जे पनि नयाँ गर्न इच्छुक छन्! मसँग नराम्रो भावना छ कि केहि समय लाग्न सक्छ, तर मसँग पर्खने समय र धैर्यता छ र म पर्खिरहेको बेला आफैंलाई थप सिक्न सक्छु। ओ :-)
मलाई लाग्यो कि यो हामी मात्र हो। अरूले पनि त्यस्तै अनुभव गरिरहेका छन् भनी थाहा पाउँदा मलाई अहिले राम्रो लाग्छ। गर्मीको समयमा, मारियन विश्वविद्यालयले HobNob 2010 लाई प्रायोजित गर्यो, ग्रेटर इन्डियानापोलिस च्याम्बर अफ कमर्स द्वारा आयोजित राजनीतिक नेटवर्किङ कार्यक्रम। मारियन विश्वविद्यालय सामाजिक मिडिया प्रायोजक थियो। हामीले नि:शुल्क MU पोलो र राम्रो खानाको सट्टामा कार्यक्रम अघि, समयमा र पछि ट्वीट गर्न फेसबुक र इ-मेल मार्फत विद्यार्थीहरू भर्ती गर्ने प्रयास गर्यौं। यो ठीक छ, तर विद्यार्थी भर्ती गर्न गाह्रो थियो। साँच्चै कडा। त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्‍यो। हामी सायद यसलाई फेरि प्रयास गर्ने छैनौं।
ट्विटरमा किशोरहरू? केवल "साइबरस्टक सेलेब्स" लाई। मैले सोधे !
अक्टोबर 13, 2010 बिहान 11:51 बजे
ढिलो जवाफको लागि माफ गर्नुहोस्, म बिरामी छु।
यो एक रोचक ठाउँ हो। मेरो कक्षा वेब मार्केटिङ हो, र मेरो कक्षाको २/३ फेसन रिटेल मार्केटिङ प्रमुखहरू मिलेर बनेको छ। तैपनि अनलाइन मार्केटिङका ​​सबैभन्दा आधारभूत मुद्दाहरू पूर्णतया विदेशी छन्, यद्यपि तिनीहरू एक उमेर समूह हो जसलाई धेरै जोडिएको छ र निर्दयी रूपमा मार्केटिङ गरिएको छ।
के तिनीहरू मार्केटिङ सन्देशहरू फिल्टर गर्नमा राम्रो छन्? के उनीहरू आफूमाथि प्रयोग भइरहेको रणनीतिबारे अनभिज्ञ छन्? वा के तिनीहरू साँच्चै उपकरणहरू प्रयोग गर्दैनन् जति मार्केटरहरूले विश्वास गर्न चाहन्छन्?
म पक्का छु कि हामी क्वार्टर मार्फत प्रगति गर्दा मसँग भन्नको लागि अझ धेरै हुनेछ र म तिनीहरूको दिमाग छान्छु।